Haddi aad taageere u tahay qoraalada Vampire Diaries, ka dibna waad fahantay qalloocinta adag waxayna u rogtay qorayaasha qoraalka taxanahan inay ka dhigaan taageerayaasha inay cidhiidhi ku fadhiyaan buruastooda. Wax jira xeelado badan oo ay qorayaashani adeegsadeen oo aad ku qori karto blog bartaada-ga oo aad ku ilaalin karto akhristayaashaada inay ku mashquulaan usbuucba usbuucba, bil ka bil iyo sannadba sannadka.
"Magaaladan waxay ubaahantahay xoogaa wicitaan ah, miyaadan u maleynaynin?" – Damon Salvatore, Xilliga 1, Episode 02
Kaliya waa inaadan arkin xusuus qorka Vampir, sheekadu waxay ku saabsan tahay gabar yar oo la kulantid Vampir (codad caan ah), laakiin kadib waxay la kulmeysaa walaalkiis sidaasna waxay ku bilaabmeysaa saddex xagal jacayl. Jika Anda memiliki noqotee, khadka sheekada waxaa ku jira waxyaabo badan oo qalloocinaya, oo ay ku jiraan doppelgangers, saaxir, cirfiid, iyo sheeko xariifyo, iyo dhammaan noocyada kale ee tayada enamirka kuwao oo oo haysa xiisaha daawada / akhristaha.
1 Bangun Wicitaankaaga
2 Qulqulka Qalin
4 Ha ogolaan Blog-gaagu inuu nuugo nolosha
Maqaalkaagu ma yahay pertengahan yar, si fiican, caajis ah? Hal siyaabood oo si sahlan u sheegi haddii aad hayso akhristayaashaada ku xiran tahay adigoo eegaya heerka aad u kacday. Waxaad macluumaadkan ka heli kartaa Google Analytics. Tusaale ahaan, booqdayaashu waxay yimaadaan goobtaada, iyagoo sii joogaya labadaba kadibna ka boodaya?
Sida laga soo xigtay maqaal ku saabsan Waqtiga Tony Haile, waxaad haysataa qiyaastii 15 ilbiriqsi inta ugu badan si aad u qaadatid dareenka akhristaha oo aad xafido.
Munaasabada Vampire Diaries ee cinwaankeedu yahay "Night of the Comet" (1 xilli-ciyaareedkii), muuqaalkii furitaanka waxaa ka mid ah nin iyo haween ku nool xeryaha. Soomalida qiiqa badan ayaa isla markiiba ku wareegsan, wada hadalka furitaanka waa naagta oo leh: "Miyaad maqashay?"
Dabcan, qorayaashu waxay leeyihiin fiiro gaar ah. Yaa ku caawin kara laakiin sii wadaya akhrinta / daawashada furitaanka sida tan?
Ma furan yihiin furitaanka? Waa mid muhiim u ah Akhri akhristayaashaada aad xiiseyneysid qabatooyinka iyo weelasha qoraalkaaga oo dhan. Fiiri Jerry Low maqaalka Qoraan Tilmaamo sida Brian Clark, Neil Patel, iyo Jon Morrow: 35 Madaxa Ka Kooban A-List Blogger.
Xusuus-qorka Vampir wuxuu caan ku yahay qalloocinta dhagarta. Fallaadho khiyaano weyn maleh kaliya ciyaarta kama beddeleyso, laakiin waxay macno u sameyneysaa daawadayaasha / akhristaha. Digniin! Lacala hadii aadan arkin dhamaan dhacdooyinka waxaa jira horjooge, hadaba ka sadhan xiga hadii aadan dooneynin inaad ogaato waxa dhacaya.
Hadal: Laga soo bilaabo Katherine oo aan xabaashii joogin, ilaa Bonnie ay geerideeda u dhimaneyso, illaa Elena oo isu rogmato vampire, showgu wuxuu ka buuxsamay qalloocinta ka dib qalloocinta. Malaha mid ka mid ah wareegga ugu weyn ee waqtiga oo dhan waa dhamaadka 6 mark Kai uu Elena geliyo qoto dheer, hurdo qurux badan oo hurdo ah oo aan soo toosi doonin ilaa Bonnie uu dhinto. Ka hadal aargudashadaada ugu dambeysa. Kali ini wuu kala tagay Elena iyo Damon (mar kale) wuxuuna dhaawacay Bonnie howsha maxaa yeelay waligeed ma arki doontid Elena mar labaad (Mise iyadu malahaa? Malaha khiyaamo kale ayaa maroojinaya?).
Qeybaha yaryar waxay u baahan yihiin di ay eegaan mawduuc si aad u kala duwan. Weli waa inay fahmaan akhristaha oo waxay noqon beberapa bulan yang lalu wax dhici kara adduunka oo la sameeyey. Si kastaba ha ahaatee, yoolka ayaa ah di la yaabiyo akhristaha.
Blog ahaan, waxaa jira dhowr qaab oo aad kaga yaabi karto oo aad ugu farxi karto akhristayaashaada oo markaa ku tuuri kara "maroojin khiyaano" noocyo kala duwan ah. Jika Anda tidak memiliki masalah, maskaxda ku hay di marooyinkaagu inuu macno sameeyo. Ma wadi kartid barta fardaha isla markaana si lama filaan ah ayaad lilin uga bixin kartaa talooyinka qurxiyo.
Sii qiimo dhimis lama filaan ah.
Martiqaadaha marti geliyaha si aad u sameysid chat online.
Soo bandhig aqoon isweydaarsi ama teleconference.
Sii fidinta fiidiyo muujinaya sida loo sameeyo lilin.
Iibso diyaarad iyo qaadashada xaglo kala duwan oo ku dheji.
Ku marti marti marti ah goobtaada.
Ku dar fariin aad u martida martida oo dhan, adigoo siinaya freebie.
U dir fariin shakhsi ah macaamiisha ugu sareysa.
Pertengahan ka pertengahan ah sababaha ugu muhiimsan dadku waxay ku hayaan daawashada Vampire Diaries waxayna ku jirtaa xilligeedii 7ad sababtoo ah jilayaasha. Daawadayaashu waxay heleen inay ogaadaan, oo jacaylkaas u jecel yihiin.
Jilayaasha waxay leeyihiin qoto dheer. Markuu Damon dhaawacmay, wuu ficili doonaa. Marka Stephan uu dhaawac yahay, wuu caatoobi doonaa, laakiin ugu dambeyntii wuu ka soo kabanayaa. Caroline waa gabadh wanaagsan. Elena waa waraaqo.
Waan ognahay waxa iyaga waxyeeleeyay. Elena waxay lumisay waalidkeed waxayna eedeeyeen nafteeda, iwm.
Waan ognahay gumeysigooda. Damon waa mid aad u dhib badan oo naga dhigo qosol. Elena waxay lilin u qaban doontaa kuwa jecel. Caroline waxay rabtaa di ay noqdaan kuwo si buuxda u fiican.
Sidee tani u tarjumeysaa bloggaaga? Akhristeyaashu waxay u baahan yihiin inay ku ogaadaan heerka shakhsi ahaaneed. Ama, haddii aad leedahay koox, lilin u baahan yihiin inay ogaadaan qoraagaada. Tani waxay ku lug leedahay dhowr waxyaalood:
Sawirrada qoraaga iyo adiga.
Sheekooyinka khiyaaliga ah ee wadaagaan mid kasta.
Cod gaar ah. Qorayaasha ugu fiican waxay leeyihiin cod xoog leh ao si fudud u aqoonsan kartid. Shaqadooda waa mid caddaalad ah oo aan loo eegin mowduucyada ay qoraan.
Qorayaashaada si fudud waa inay helaan shaqsiyaad mararka qaar. Tacliinta waxay kuu sheegi doontaa di aadan waligaa “adiga” u isticmaalin qoraalkaaga. Jika Anda tidak memiliki uang, haddii aad rabto inaad qoraalkaagu u muuqdo mid shaqsi ah oo ku yaal baloog, waxaa muhiim ah inaad lahadasho akhristayaashaada. Xaqiiqdii, waxaan dhihi lahaa inay aad uga muhiimsan tahay shaqsiyan intii aad sax ahaan laheyd.
Wadaagista khibradaha. Tunggu muhiim di adiga iyo qoraayaashaadu aad diyaar u tihiin inaad wadaagtaan halka ay ku fashilmeen iyo halka ay ku guuleysteen si akhristayaashu u ogaadaan inay ku kalsoonaan karaan talobixinta ay helayaan.
Ha ogolaan Blog-gaagu inuu nuugo nolosha
Qorayaasha qorayaasha (iyo qorayaasha qoraaga) waxay ku qaadan karaan waqti aad u badan oo abuuraya sheeko ay bilaabaan inay dareemaan gubasho. Hadad aad maalinba maalinta ka dambeysa ku bixiso kumbuyuutarkaaga la’aantiis, waxing male maleyneysaa inaad bilaabi doonto halgan inaad ku timaadid lilin xiiso leh oo aad ku qorto.
Haddi aad iska aragtid inaad hor fadhidid furahaaga, oo aadan wax qori karin, waxaa la joogaa waqtigii aad si fiican ugu buuxin lahayd hal abuurkaaga. Julia Cameron waxay ka hadlaysaa sida ugu wanaagsan ee loo soo bandhigi karo hal abuurkaaga buugeeda ‘The Artist’s Way’. Waa muhiim di dadka hal abuurka ahi ay waqti ku qaataan samaynta nashaadaad kale si ay uga badbaadaan inay xannibaan.
Soco socod, booqo matxaf, ama waxaa laga yaabaa inaad waqti yar la qaadato Ian Somerhalder (Damon) inaad daawato dhacdadii ugu dambeysay ee Vampire Diaries. Waxaad la yaabi doontaa sida ugu dhaqsaha badan ee aad ugu hesho dhiirigelin qoraalkaaga iyo ganacsigaaga.
Haddii aad taageere u tahay qoraalada Vampire Diaries, ka dibna waad fahantay qalloocinta adag
Haddii aad taageere u tahay qoraalada Vampire Diaries، ka dibna waad fahantay qalloocinta adag
Haddii aad taageere u tahay qoraalada יומני ערפדים, ka dibna waad fahantay qalloocinta adag
Ampy ho anao ny vokatra sy ny tolotra omena anao;